Ku garaac fiilooyinka bilaa -waayirka ah ee Magnetic -ka ee alaab -qeybiyaha iyo Shirkadda | Koox
Fiilada bilaa -waayirka ee birlabka leh fiilada
Ku -dallacsiinta birlabka
15W ku dallac degdeg ah
Si Weyn Isula Jira
D467 Charger Wireless Wireless waxaa si gaar ah loogu talagalay isku-dheelitirka magnetic-ka ee taxanaha iPhone 12, 12pcs oo ku dhex jira xannibaad birlab xoog leh, shaqada xayeysiinta magnetic-ka xooggan ayaa kuu oggolaaneysa inaad si xor ah u hagaajiso xagasha adigoon ka weecan xarunta xeedho.
Magnetic-ka aadka u sarreeya ayaa xejiyahayaga ku haya meesha oo ka ilaaliya siibista. Ku rid taleefankaaga gacanta badhtamaha xeedho si aad u hesho natiijada ugu fiican ee lacag bixinta.
Iyada oo leh heerka tayada Qi, Chargers Magnetic -ka ayaa taageeraya 4 qorshayaal awoodda wax soo saarka: 5W/7.5W/10W/15W, Waxay si otomaatig ah ula qabsan doontaa awoodaha wax soo saarka ee kala duwan iyadoo la raacayo qaabka taleefanka si loo hubiyo ku -dallacsiinta degdegga ah ee nabdoon ee aaladdaada.
Naqshadeynta ugu weyn ee 15W ayaa oggolaanaysa, si taleefankaagu si sax ah ula jaanqaado gariiradda lacag -bixinta oo lagu dhejiyo suufka lacag -bixinta si loo gaaro deg -deg deg deg ah oo xasilloon. Iyada oo leh tikniyoolajiyadda ilaalinta caqliga leh oo dhammaystiran, waxay bixisaa shaqooyin sida xakamaynta heerkulka, korantada xad-dhaafka ah iyo ilaalinta hadda jirta, ilaalinta wareegga gaaban, iyo ogaanshaha jirka shisheeye.
Soo -qaadaha magnetic -kaani wuxuu la jaan qaadayaa iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max iyo sidoo kale la jaan qaada kiisaska taleefanka MagSafe iyo moodooyinka AirPods oo leh kiiska lacag -bixinta wireless. Khibradda isku-xirnaanta birlabka ayaa kaliya quseysa iPhone 12 mini / 12 /12 Pro / 12 Pro Max. Iyadoo aan lahayn kiiska ku dhejiska birlabka, taleefannada aan lahayn Mag-Safe ma taageeri doonaan muuqaalka magnetic-ka.
Ilaalinta iyo Badbaadada
Charger Wireless Wireless oo leh tikniyoolajiyadda ilaalinta caqliga leh si ay u bixiso xakamaynta heerkulka, xad -dhaafka iyo ilaalinta xad -dhaafka ah, ilaalinta wareegga gaaban, iyo ogaanshaha shayga shisheeye. Taleefankaagu ha ahaado mid qabow oo nabdoon inta aad lacag ku shubayso
Wax soo saarka la qiimeeyay 5W/7.5W/10W/15W
Joogtaynta 127.7kHZ ± 6HZ
Aaladaha Taageera 5W/7.5W iPhone, 10W/EPP15W Samsung
Ilaalinta SCP, OTP, OCP, OVP
Hore: Cad Cad Silicone Liquid Silicone Liquid for taxanaha iPhone 12
Xiga: Magnetic 2 in 1 Wireless Charging Stand for iPhone iyo Airpods
Case Silicone Liquid Liquid oo loogu talagalay taxanaha iPhone 12
Magnetic 2 in 1 Wireless Charging Stand for iPh ...
Cad Silicone Liquid Silicone Liquid for iPhone ...